Inkonzo yethu yenze imimangaliso emininzi
I-CMOAPI inokunikezela ngezi nkonzo zilandelayo, zonke zixhaswe yimigaqo-nkqubo yethu eluqilima kukhuseleko lwePropathi (i-IP), ukuqinisekisa ukuba iiprojekthi zisingathwa ngokungqongqo ngokuzithemba ngamaxesha onke. Ukuphuculwa kwendlela yokuphucula indlela yokusebenza yokwenziwa komsebenzi ukusuka kwinqanaba ukuya kwi-Metric Tons Exclusivity xa kufuneka inkxaso egcweleyo ebandakanya i-HPLC, GC-MS kunye ne-NMR FTE yenkonzo kwiimveliso apho inkqubo yokwenziwa sele ikho, i-CMOAPI inokubonelela ngemvumelwano kunye neenkonzo zokurhafisa kwinkqubo yokuthengisa. Ukuchazwa komthengi ngokwakhe. Ukongeza kwiinkonzo ezichazwe apha ngasentla, sikwabonelela ngenkonzo yokuhluza izinto ezingafunekiyo (ngaphandle kweendleko ezongeziweyo) ukuqinisekisa ukuba, naphina apho sisebenzisa imithombo yexabiso eliphakamileyo ngexabiso lentengiso. I-CMOAPI ikwakhona ukubonelela ngophando lwenkcubeko kunye nophuhliso lwenkonzo elungiselelwe iimfuno ezithile zabathengi. Sinerekhodi eligqwesileyo lokusombulula imiceli mngeni yecandelo lezinto eziphilayo kubathengi bethu kunye neeprojekthi zinokusekelwa ngokusisigxina (FTE) okanye amaxabiso emihla ngemihla. Nxibelelana nathi ukuze ufumanise ukuba iqela lethu le-R & D elinobuchule kakhulu lingenza njani iprojekthi yakho elandelayo impumelelo yethu yakutshanje.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, i-CMOAPI ibonelela ngenkonzo ebekekileyo kunye neenkonzo zokwenza. Inqanaba lethu lenkonzo linokuqala ukusuka kwibatch encinci ye-milligram ukuya kwiitoni zeenkonzo ezinkulu zokuvelisa. Uninzi lwabathengi bethu bakwiNtla Melika, eYurophu, eAisa, kubandakanya iPfizer, ililly, roche, GSK, MSD, bayer kunye nezinye inkampani ezidumileyo. Zonke iinkonzo zethu ezenziwayo ngokwesiko kunye neenkonzo zokwenza zenziwa phantsi kweemeko zokugcina imfihlo ngokungqongqo. Amaqela ethu eprojekthi ahlanganisiweyo axhaswe liqela elinamava kakhulu kunye nabazinikeleyo kwiqela leekhemikali. Ukusebenza ngeearhente ezinobubanzi obushushu ukusuka ku-100˚C ukuya kuthi ga kwi-300˚C, kunye namabala asusela kwi-5L ukuya kwi-5000L, ixabiso lihanjiswa kubathengi ngokusebenza ngokufanelekileyo kwendlu yephakathi yeeprojekthi eziphambili (ukuya kuthi ga kubungakanani beetoni) kunye nokusebenzayo izithako zamayeza. Imveliso yenziwa kwiziko lethu lokuthengisa elingelolakho lonke. Senza ikhonkco lonikezo loncedo lweemichiza zemveliso ukuze uhlangabeze ukuhanjiswa kweprojekthi ethile ngesantya esiphezulu kunye neendleko ngelixa uhlangabezana nemigangatho ephezulu yenkqubo yokuthobela kunye nokuthobela. Iinkqubo zokuphucula iimveliso zivumela ubungakanani bebatch eguqukayo kunye nomgangatho wemveliso ophuculweyo. Zonke iinkqubo zenzelwe ukufezekisa imigangatho engqongqo yolawulo.
I-CMOAPI yokuFumanisa iziyobisi sisisombululo esisekwe kwilifu, esibonisa ulwazi esibonisa ulwazi lwenzululwazi kunye nedatha yokuveza unxibelelwano olwaziweyo nolfihliweyo olunokunceda ukwanda kokuvela kwesayensi. Iqonga livumela abaphandi ukuba bavelise ii-hypotheses ezintsha ngoncedo lokubona okunamandla, ukuqikelela okusekwe kubungqina kunye nokulungiswa kolwimi lwendalo oluqeqeshiweyo kwisizinda sobomi besayensi. I-CMOAPI yokuFunyanwa kweziyobisi inakho ukukhawulezisa ukuchongwa kwabavavanyi bamachiza inoveli kunye neethagethi zamachiza zenoveli ngokubambisa amandla edatha enkulu.
Iqela lethu lokukhulisa amachiza, elibandakanya oososayensi abangaphezu kwama-50 kumazwe ethu, likwadlula oko kulindelwe nakwezona projekti zinzima. Ukusebenza kwilabhoratri ekumgangatho wezinto ezixhotywe ngenkqubo yangoku kunye nezixhobo zohlalutyo, siqhuba kakuhle ekufumaneni indlela, ukukhawulezisa inkqubo, ukuphuculwa kweemeko zokuphendula zokwenza ubungakanani bezinto ezinokubakho kwiimvavanyo zangaphambi kokuba kwenziwe okanye ukwenziwa kwemveliso enkulu. Ngenkxaso kwiqela lethu leengcali labahlaziyi, iinjineli zeekhemikhali kunye neengcali zeQA, siphuhlisa ngokukhawuleza nangokufanelekileyo iinkqubo zokwenza imveliso ukuze sihlangabezane nayo nayiphi na imfuno.